Ngalaba na-ahụ maka njem nlegharị anya Malawi ruru ahịa US na njem njem US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Ngalaba na-ahụ maka njem nlegharị anya Malawi ruru ahịa US na njem njem US
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Malawi • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Malawi Department of Tourism, nkewa nke Malawian Ministry of Industry, Trade and Tourism, ahọpụtala onye ndụmọdụ ndị America CornerSun Destination Marketing ka ha bụrụ ndị na-elekọta ndekọ na North America.
CornerSun ga-elekwasị anya n'ichepụta atụmatụ ịbanye na ahịa maka Malawi bụ nke na-atụkarị ohere na ahịa ma guzobe Malawi na North America n'akụkụ ndị ọzọ Africa na-aga nke ọma n'afọ ndị na-adịbeghị anya, dịka South Africa.
A ma ama na ndị Malawi mara mma nke ndị obodo ya. Akụ a dị ntakịrị amachaghị nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye gụnyere anụ ọhịa, ọdịbendị, njem, ebe mara mma, yana nnukwu Ọdọ Mmiri Malawi. Ọtụtụ mmadụ na-ewere njem otu njem kwa afọ dịka mba kachasị mma na mpaghara Sub-Saharan Africa.
Njem nlegharị anya nke Malawi ahụla mmepe na-enweghị atụ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Emeghewo ụlọ obibi ọhụrụ ma ụlọ oriri na ọ upgraụ hotelsụ ndị dị ugbu a abawanyela ma kwalite. Akụrụngwa ndị njem na-adị obere ma dị elu. Mkpakọrịta ohuru nke ọha na eze chebere ọdịnihu nke anụ ọhịa nke mba ahụ site na atụmatụ nchekwa na itinye ngwaahịa na nchekwa ngwaahịa ma na-emeziwanye ahụmịhe safari. Ihe a niile tinyere ego ọhụụ emere na mpaghara mebere Malawi kọntinent # 1 nke kọntinenti na-apụta.
"Site na ndị America na-aga Africa na ọnụ ọgụgụ ndekọ na nyocha mgbe niile maka ebe a na-achọpụtaghị na-enye ahụmịhe dị elu, enwebeghị oge na-atọ ụtọ karịa Malawi" Onye isi nchịkwa CornerSun, David DiGregorio kwuru. Ọ gara n'ihu, "Anyị na-asọpụrụ ịbụ ndị na-anọchi anya ebe a kara aka ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka ndị njem America maara ihe na-achọ ihe dị egwu nke onyinye ụwa, ọdịbendị na anụ ọhịa".
Maka ama ndi ozo banyere otutu onyinye di iche iche di iche iche di na Malawi http://www.visitmalawi.mw, soro @TourismMalawi na Twitter na Malawi Tourism na Facebook.